Thwebula Steam 2.1.6 – Android – Vessoft
Steam – isicelo Ukugunda ukuxhumana futhi ulandelele Closeouts imidlalo wenkampani Valve. Isofthiwe kwenza ukusesha, ukuthenga kanye ukubuka ulwazi mayelana game. Steam ikuvumela ukuba ugcine umbhalo walokho imidlalo abangani bakho badlala futhi bakhulume nabo zengevu. Isofthiwe futhi kwenza ukugcina ithrekhi of izindaba ezibalulekile of the game emhlabeni, updates, izaphulelo kanye ukukhushulwa.
Xoxa nabangani in zengevu
Ikhono ukuthenga imidlalo
Amathrekhi updates izindaba, izaphulelo kanye ukukhushulwa
Amazwana on Steam:
Steam Ahlobene software: